नीतिमा बेथिति - समसामयिक - नेपाल
‘मेरो सरकार’ शब्दले २० वैशाख ०७६ मा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम ओझेल मात्र परेन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजसी ठाँटमाथि पनि निरन्तर प्रश्न उठे । भण्डारीको शाहीशैलीको आलोचनासँगै बग्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र छिर्ने मौका कमैले पाए ।
लोकप्रियताको लोभमा आउने सरकारी कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्नुको साटो उल्टै नारा थपिइरहेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता, आर्थिक हैसियत, प्राविधिक सम्भाव्यताको आकलन र अध्ययनबिनै खल्तीका योजना समेट्दा प्रगति सुस्तमात्र होइन, शून्य देखिनुअस्वाभाविक होइन ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हुलाकी राजमार्गसम्म यस्ता थुप्रै परियोजना छन्, जो सरकारी आत्मप्रशंसाभित्र वर्षौंदेखि जेलिएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै उदाहरण पनि लिन सकिन्छ । एकदशकदेखिविमानस्थल निर्माण प्रयास जहाँको तहीँ छ । तर हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण सुरु गर्ने सन्दर्भ छुट्दैन ।
१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमानको विमानस्थल निर्माण सपनाजस्तै पीडादायी सपना हो, मेलम्ची आयोजना । २१ वर्षदेखि निर्माणाधीन आयोजना करिब १७ अर्ब लागतबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । ४ वर्षदेखि त ‘यसै वर्ष आइहाल्छ’ भनेर प्रचार गरिएको छ, नीति तथा कार्यक्रममा । केही महिनापहिला इटालियन ठेकेदार सीएमसी भागेपछि निर्माण ठप्प छ । तर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ०७६ भित्र सक्ने उल्लेख छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विश्लेषणमाहरेक नीति तथा कार्यक्रममाराजनीतिक लोकप्रियतावादको गलत अभ्यासबाट पाइला चालिएका छन् । “प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमताको आकलन गरिँदैन,” कोइराला भन्छन्,“त्यसमाथि योजनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि अन्तरघुलित हुन्छन् ।”
अर्को छुटाऊनै नमिल्ने कार्यक्रम हो, युवा लक्षित कृषि कार्यत्रम । फाँचवर्षदेखि निरन्तर युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमबारे बोलिएको छ ।युवालक्षित ती कार्यत्रमबाट युवाले सरकारबाट आर्थिक सहायता भने पाउन सकेका छैनन् ।
०७३ को नीति तथा कार्यक्रममा दुईवर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको थियो। तर वर्षमा २६ अर्बको चामल आयात गर्ने देशमा दुईवर्षमै आत्मनिर्भर हुन सम्भव थियो/थिएन,समीक्षा नै भएन । खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम तीव्र हुने र सिँचाइको अव्यवस्थाले लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन ।
रोजगारी सिर्जनाकै सन्दर्भमा गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवर्षभित्र रोजगारका लागि विदेश जाने परिस्थिति अन्त्यको सपना देखियो । र, त्यही सपनाअनुसार प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सुरु त भयो तर अहिलेसम्म रोजगारी सिर्जना भइसकेको छैन । यो वर्ष त्यसको समीक्षा त परको कुरा, आँकडा पनि गोलमटोल आयो । भनियो,पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरा त अटाएन नै,०७५ को ‘अर्गानिक नेपाल’ बनाउने सपना पनि उडाइदियो । यस्तै प्रसंग उप्काउँदा ०७५ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल गुणस्तर’ को सन्दर्भ छुटाउन मिल्दैन । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात,सडक, विमानस्थल, पार्क तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान गर्ने सेवामा ‘नेपाल गुणस्तर’ लागू गर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो र कसरी कार्यान्वयनमा छ भन्ने यकिन भएको त छैनन् नै, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा बेपत्ता भयो ।
यसरी बेलामौकामा कार्यक्रम बेपत्ता हुनुमा राजनीति आग्रहको भूमिका देख्छन्कोइराला।“प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले योजना जबर्जस्ती लेख्न लगाउँछन्, पछि प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिँदैन अनि फाल्नुपर्छ,”उनी भन्छन् ।
पोहोरपाँचवर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सपना थियो । अझ दुई वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रमले पाँचवर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कल्पना गरेको थियो । अहिले नागरिकको लगानीमा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हरेक वर्ष फेरिने तथ्यांकले सरकारको अस्थिर मनोविज्ञान र राजनीतिक पूर्वाग्रह झल्काइरहेको हुन्छ ।
बेसुरमै योजना सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने प्रमाणचाहिँनेपाल भ्रमण वर्ष–०२० सँग जोडिएको उदाहरणले बताउँछ । ०७३ मा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने र १० लाख पर्यटन भित्र्याउने सोचिएको थियो । तर ०७४ मा आइपुग्दा त्यो सन् ०२० मा पुग्यो । १० लाख बढेर २० लाख पुग्यो, अपेक्षा ।
०७३ मा आएको स्नातक तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपमा पठाउने योजना अलपत्र परिरहेका बेला ०७४ मा बेपत्तै भयो । ०७६ मा फेरि आइपुगेको यो योजना पञ्चायतकालमै कार्यान्वयन भइसकेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषणमा कतिपय कार्यक्रम नियमित प्रक्रियामा छिरेफछि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदैन । बहुवर्षे सबै कार्यत्रम नीति तथा कार्यक्रम समेटिँदैन, नागरिकलाई चासो भएका योजनामात्रै राखिन्छ ।
पाँचवर्षमा काम सक्ने भनेर पोहोरको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गबारे बोलिएको थियो । त्यसमा सन्तोषजनक प्रगति नहुँदै अहिलेचारवर्षमा सक्ने भनियो ।०६४ मा सुरु मध्यपहाडी लोकमार्ग ०७५ मै सक्ने लक्ष्य थियो । ०७५ मा नसकेपछि०७८ सम्म तानियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा ०७९ पुग्ने देखिन्छ । करिब ७९ अर्ब १८ करोडमा बन्दै गरेको लोकमार्गको ‘राइट अफ वे’ प्रस्ट भइसकेको छैन ।
त्योभन्दा भिन्न अवस्थामा छैन, हुलाकी राजमार्ग । ०४७ मा बनाउन सहमति भएको यो राजमार्ग ०६६ मा बल्ल ठेकेदार र परामर्शदाता छनोट भए । त्यसपछि बनाउन सुरु यो राजमार्गसकिने अझै छाँटकाँट छैन ।२५ अर्बबाट समय लम्बिएसँगै लागत ४७ अर्ब पुगिसक्यो, जबकि अहिलेसम्म जम्माजम्मी ३९ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ ।
एक दशकदेखि सरकारसँग डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सन्जालसँग जोड्ने लक्ष्य छ, ०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि छुटेको छैन । तर भौगोलिक विकटताका कारण हुम्लामा अझै तीन/चारवर्ष सडक पुग्ने छाँट छैन । पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइमा आयोजनाले प्रगति नगरे पनि बजेटको निरन्तरताका लागि नीति तथा कार्यक्रममासमेटिन्छन् ।
अझ आश्चर्य त नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुगुको खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उद्धार गर्न सरकारले हेलिकप्टर लगेको’ प्रसंग पनि अटेको छ । निरन्तर चल्ने हिमाल सफाइ अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रमलाईहिमशिखर सफाइ अभियान भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
२० वैशाख ०७६ मा ०७५ मा १ हजार ६ सय किमि सडक कालोपत्रे गरेको र तीन पुल निर्माण भएको प्रगति विवरण समेटिँदादुई महिना पहिला ३ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एक वर्षे उपलब्धिमा ८७ पुल बनेका र २सय २१ किमि सडककालोपत्रे भएको विवरण थियो ।
दुई तिहाइको सरकार हाँक्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग जति अनुकूल समय विगतका प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । त्यो अनुकूलता ओइलाउँदै गएको संकेत यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमले गर्छ । आर्थिक सम्भाव्यता, प्राविधिक सहजता,प्रशासनिक संयन्क्रको क्षमता र राजनीतिक इच्छाशत्तिसहितको नागरिक सहभागिताले योजना कार्यान्वयनमा गति हुन्छ । तर यी पक्षभन्दा पनि लोकप्रियतावादको लोभमा घोषणा हुने योजनाकोप्रगति सुस्तमात्र होइन, शून्य छ । यही बिन्दुमा टेकेर सरकारले आत्मप्रशंसा होइन, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बासी प्रतिबद्धता, अतिरञ्जित तथ्यांक
आगामी वर्षका लागि पेस हुने बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने ऐनाको रूपमा प्रदर्शन हुन सक्नुपर्ने २० वैशाखको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्राध्यक्षले कार्यकारीको छनकबाहेक विगतकै बाटो समाएको देखियो । अनौपचारिक रूपमै भए पनि संसदीय समितिमा नीति तथा कार्यक्रमबारे हुने गरेको छलफल यसपटक सरकारको अति आत्मविश्वासका कारण क्रमभंग भयो । सांसदहरूलाई लागेको कुरा संसद्मै राख्न औपचारिक व्यवस्थाको पहलबाट प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूलाई झस्काइदियो ।
सुरुआती क्रमभंगबाट भएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा भने बासी विषयले नै प्रमुखता पायो । यसमा नीति तथा कार्यक्रममा भद्दा पक्ष र चुनिँदा पक्षबारे समीक्षा गरिएको छ ।हुकुमी पद्धतिको पञ्चायती अवसानका लागि मुटुको किला राष्ट्रिय विकास सेवा थियो । पढेलेखेका विद्यार्थीलाई अनिवार्य गरिएको सो सेवाले राष्ट्रबारे विभिन्न तह र तप्काबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने, भौगोलिक विषमता बुझ्ने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने आधार थियो । पञ्चायती सरकारले बन्द गरेको यो कार्यक्रममा खुलापन र अवसर उपयोगको निष्पक्षता कायम गर्न सके चेतना अभिवृद्धि र विकास निर्माणमा योगदान दिन शिक्षित युवालाई अवसर मिल्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपालका कतिपय पहाडी भेगमा पानी अभावका कारण बस्ती खाली हुँदैछन् । बढ्दो सहरीकरणको चुनौती पिउनेपानीको व्यवस्था हो । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले बबई भेरी डाइभर्सन योजनाबाट उत्साही भएर कालीगण्डकी–तिनाउलगायत सम्भावित अन्य नदीमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । सिँचाइको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात रोक्न, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतको व्यवस्था भने चुनौतीपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको समग्र आकलन नभएको सन्दर्भमा यदि नीति कार्यक्रमले उल्लेख गरेजस्तै मुकुलभित्र उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको अद्यावधिक आँकडा तयार भएको हो भने संघीयता सफलताको कारक बन्न सक्नेछ । तर प्राकृतिकस्रोत तथा वित्त आयोगले स्वायत्त अनुभव गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विद्यमान गुनासो हटाउन सक्नुपर्छ ।
कृषिलाई यान्त्रिकीकरण,व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने नारा पुरानो भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनले पूर्णता पाउनुअघि नै शंकाको घेरामा परेको छ ।अनुदान संस्था कृषकसम्म पुग्न नसकेकाले नीतिलाई पुनरावलोकन गरी कृषिमैत्री बनाइने सकारात्मक उद्घोष छ ।
प्रस्तुतदस्तावेजको भद्दा पक्ष भनेको विगत दशकदखि कर्णप्रिय बनाउन दोहोर्‍याइँदै आएका एजेन्डा हुन् । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम सडक सन्जालले जोड्ने कार्यक्रम दशकअघिकै हो । साक्षरता, गरिबी, सुकुम्बासी समस्या आदि यस्ता विषय हुन्, जुन सामाधान भए कतिपय प्रशासकीय ओहोदावालाको चुरीफुरी बन्द हुन्छ । यसपटक दुई वर्षमा साक्षरता हासिल गर्ने भनिएको छ ।
भोकले कोही मर्दैनन् भन्ने ऊक्ति छ । सुकुम्बासीमुत्त कमैया र मुक्त हलियाका लागि आवास व्यवस्था दुईवर्षमा गरिने पनि उल्लेख छ । तर गत वर्षको यिनै कार्यक्रमका उपलब्धि के भए भन्नेबारे मौनता छ ।जुनविषयमानतिजा सार्वजनिकगरिएको छ, त्यो भ्रमपूर्ण छ ।
एक वर्षे कार्यकालको प्रगतिमा२ फागुन ०७५ मा प्रधानमन्त्रीले ८७ पुल बनेका र २ सय २१किमि सडक कालोपत्रे भएको भनिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा भने ३ सय पुल बनेकार १ हजार ६ सय किमि सडक कालोपत्रे भएको भनियो । डेढमहिने अन्तरालमा यो अन्तर कसरी भन्ने विषयमा घोत्लिँदा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना यस्तै अतिरञ्जित तथ्यांकबाहेक अरू उपायबाट के हुन सक्ला र ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पुरानै विषय हुन् । आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रका लागि त विदुषीकै नामबाट चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रकरण नम्बर ३६ मा १० करोड विनियोजन भएकै छ । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्मारक विज्ञान विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयगरी तीन विश्वविद्यालय बनाइँदैछ ।
दूरचिकित्साशिक्षा, दूरशिक्षा पद्धति अवलम्बन गरिने प्रसंग नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएकोछ । यद्यपि, दूरशिक्षा विश्वविद्यालय कार्यान्वनमा रहे पनि बस्ने थलो र काम गर्ने उपकरण अभावले बेसहारा बनेको छ । बनेपाको आईसीटी केन्द्र अलपत्र छ । दूरशिक्षा विश्वविद्यालय अवसरबाट वञ्चितका लागि देशविदेश सबैतिर लोकप्रिय र समाजसापेक्ष हुने कुरा किन अनदेखा भइरहेको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम दुई प्रकरणमा फरक किसिमले पेस गरिएको छ । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत एकवर्षमा पाँच लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । वित्तीय सेवा विस्तारअन्तर्गत एक वर्षमा ५० हजार र चार वर्षमा तीन लाख स्वरोजगारी अवस्था सिर्जनाजस्ता अन्योलपूर्ण तथ्य समेटिएको छ ।
यसवर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेमा सरकार आशावादी छ । यसमा योगदान कृषिको रहने गरेको छ । समयमा मलखाद नपाएर हाहाकार हुने स्थितिको अन्त्य भएको छैन । मलकारखाना खोल्ने लेखिएको हुन्थ्यो भने विषय बासी भएपनि किसानमा उत्साह र रोजगारीको अपेक्षा बढ्थ्यो । चालूवर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति उल्टो दिशामा बगेको विगत केलाउँदा यसपटक सच्चिनेछभन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन ।
(क्षत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)